Shiinaha Mashiinka Mashiinka iyo Soo-saaraha | Meesha
Mashiinka CNC waa tikniyoolajiyadda adeegsata qalabka mashiinka saxda ah ee kumbuyuutareedka kumbuyuutarka si loo farsameeyo qalabka shaqada. Noocyada qalabka mashiinka ee loo isticmaalo farsameynta waxaa ka mid ah lathe CNC, mashiinka axdi qarameedka CNC, caajis CNC iyo mashiinka wax shiida, iwm.
MESTECH waxaa lagu qalabeeyaa tiro ka mid ah qalabka wax lagu farsameeyo ee CNC, oo ay weheliso koox aad u fiican oo naqshadeeya iyo injineerada mashiinka iyo hanaan adag. Sharaf bay noo tahay inaan siino macaamiisheenna wax soo saar tayo sare leh, keenis waqtiyaysan iyo adeegyo
Warshadaha mashiinada iyo qalabka waa hooyada warshadaha casriga ah. Warshadaha qaada mashiinada wax soo saarka iyo qalabka waa warshadaha wax soo saarka farsamada. Heerka farsamo ee farsamaynta farsamada ayaa go'aamisa heerka tayada mashiinnada iyo qalabka.
Waa maxay qalabaynta saxda ah?
Mashiinku waa habka wax soo saarka ee alaabta looga saarayo qalabka shaqada si loo helo qaabka iyo cabirka loo baahan yahay. Mashiinnada loo isticmaalo farsamaynta farsamada waxaa loo yaqaannaa qalabka mashiinka. Qalabka loogu talagalay qaybaha mashiinka waxaa ka mid ah birta, biraha aan birta ahayn iyo qaabab kale iyo biro xoog u deggan, iyo sidoo kale caagag adag iyo wax soo saar alwaax ah. Mashiinku wuxuu ku guuleysan karaa qaybo sax ah, sidaa darteed waxaan ugu yeernaa mishiinka saxda ah. Waa habka ugu weyn ee loo farsameeyo soo saarista qaybo mashiinno kala duwan ah.
Horumarinta tiknoolajiyada kombuyuutarka, tiknoolajiyada kontoroolka dhijitaalka ah ee warshadaha waxaa lagu soo bandhigayaa qalabka qalabka mashiinka, kaas oo ogaanaya dijitaalka iyo otomatiga shaqada qalabka mashiinka oo si weyn u wanaajiya waxtarka wax soo saarka iyo saxsanaanta wax soo saarka. Tiknoolajiyada noocan ah oo u adeegsata nidaamka kombiyuutarka inay ku shaqeyso farsamaynta qalabka mashiinka waxaa loo yaqaan tiknoolajiyadda farsamaynta farsamada gacanta Qalabka mashiinka ee adeegsada nidaamka qalliinka kumbuyuutarka waa aaladda mashiinka xakamaynta lambar (mashiinka CNC).
Mashiinka 'CNC machining' (saxsameynta) ayaa ah geedi socod wax soo saar. Qalabka mashiinka wuxuu ku shaqeeyaa gacanta barnaamijyada kombiyuutarka. Barnaamijyada kombiyuutarka ayaa lagu calaamadeeyay inay u guuraan jaraya si ay u soo saaraan qaybo saxsan oo mashiin ah oo u dhigma cabirka barnaamijka sumaysan (oo loo yaqaan G code).
Mashiinka 'CNC machining' waa geedi socod wax soo saar kaas oo barnaamijka kumbuyuutarka ee horay loo sii qorsheeyay uu muujinayo dhaqdhaqaaqa qalabka dhirta iyo makiinadaha. Nidaamkan waxaa loo isticmaali karaa in lagu xakameeyo mashiinno taxane ah oo adag, min mashiinnada wax lagu shiido iyo kuwa latashi ilaa mashiinada wax lagu shiido iyo router-yada. Iyada oo loo marayo makiinadaha NC, hawlaha goynta saddex-geesoodka ah ayaa lagu dhammayn karaa dhowr jeer oo la soo jeediyo.
Badanaa, softiweerka CAM (Soosaarida Caawinta Kumbuyuutarka) waxaa loo adeegsadaa dukaanka mashiinka si toos ah loogu akhriyo faylasha CAD (Naqshadeynta Kumbuyuutarka) lana soo saaro barnaamijka 'G code' si loo xakameeyo qalabka mashiinka CNC.
Waa maxay Qalabka Mashiinka Mashiinka CNC?
Qalabka mashiinka CNC waa aalad mashiin oo isku dhafan qalabka mashiinka guud iyo nidaamka kombiyuutarka.
Qalabka mashiinka la kontoroolo waxaa ka mid ah shiidi, mashiinada wax shiida, lathes, leylis iyo qorsheeyeyaal.
In geeddi-socodka ah ee processing lathe CNC, go'aaminta dariiqa processing CNC guud ahaan raacaa mabaadi'da soo socota:
(1) Saxsanaanta iyo dusha sare ee qalabka shaqada ee lagu shaqeynayo waa in la damaanad qaadaa.
(2) Ka dhig wadada howsha ugu gaaban, yaree waqtiga safarka madhan iyo wanaajinta waxtarka hawlgalka.
(3) Fududee culeyska shaqada ee xisaabinta tirooyinka sida ugu macquulsan uguna fududee nidaamka howsha.
(4) Qaar ka mid ah barnaamijyada dib loo isticmaali karo, subroutines waa in la isticmaalo.
Noocyada qalabka mashiinka CNC:
1.CNC mashiinada wax shiida
Xarunta machining 2.CNC.
Mashiinnada Maskaxda ee Dhex-Dheerta Korontada 4.Electrical.
5.CNC Mashiinka Mashiinka Goynta
6.CNC mashiinka shiidi sax
Mishiinka dheecaanka korantada ee mashiinka CNC
Feature ee machining CNC
Mashiinka CNC wuxuu ka adkaanayaa joojinta hawlgalka gacanta ee qalabka farsamada dhaqameed. Waxay leedahay waxtar sare, tayo deggan, cabir sax ah iyo otomaatig. Waxay aad ugu habboon tahay saxsanaanta sare iyo wax soo saar tayo sare leh. Mashiinka CNC waa hab lagama maarmaan ah oo lagu xaqiijiyo soo saarista qaybaha saxda ah.
Codsiga mashiinada CNC
1. Iska yaree tirada qalabka iyo qalabka, hana u baahnayn qalab isku dhafan oo isku dhafan si aad ugu farsameyso qaybaha leh qaabab isku dhafan. Haddii aad rabto inaad bedesho qaabka iyo cabirka qaybaha, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad wax ka beddesho hababka lagu shaqeynayo qaybaha, taas oo ku habboon horumarinta iyo wax ka beddelka alaabada cusub.
2. Tayada wax-soo-saarka ee CNC waa mid deggan, saxsanaanta wax-soo-saarku wuu sarreeyaa, saxsanaanta ku celcelintu waa mid sare, waxayna la kulmi kartaa shuruudaha wax-qabadka ee diyaaradaha.
3. Waxtarka wax soo saarku wuu ka sareeyaa hadday tahay noocyo kala duwan iyo wax soo saar dufcadood oo yar, taas oo yareyn karta waqtiga diyaarinta wax soo saarka, hagaajinta qalabka mashiinka iyo kormeerka geedi socodka, iyo sidoo kale yareynta waqtiga goynta sababtoo ah isticmaalka tirada ugu badan ee goynta. .
4. Astaamaha isku dhafan ee Mashiinka ah oo ay adagtahay in lagu farsameeyo qaababka caadiga ah, xitaa waxay ka baaraandegi karaan qaybo ka mid ah oo aan la arki karin. Isku soo wada duuboo, waa nooc ka mid ah qaybaha saxda ah ee qaabdhismeedkoodu adag yahay iyo dufcaddo yaryar oo wax soo saar ah, sida dhidibka saxda ah, fiilooyinka dabinka indhaha, biinanka iyo wixii la mid ah, kuwaas oo ku habboon.
Shirkadda Mestech waxay siisaa macaamiisha adeegyada mashiinnada saxda ah ee noocyo kala duwan oo bir ah, qaybo caag ah. Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah, fadlan nala soo xiriir.
Hore: Qaybaha ridaya dhinta
Xiga: Qaybaha mashiinka
Qaybaha Caaga ee Mashiinka Mashiinka
Xarunta Mashiinka Vertical